Author: Ela Williams
Ela dia mpitsangatsangana. Ny fitiavany ny dia dia nitombo fony izy kely noho izany, lasa masoivohon'ny fizahan-tany izy mba hahafahany manome vaovao, toro-hevitra, ary famandrihana serivisy ho an'ny olona maniry handeha. Amin'ny fotoanany malalaka, tiany ny mamaky ary indrindra ireo izay misy tantara mifandraika amin'ny dia. Ny hafaliany sy ny fankasitrahany ny fitsangatsanganana dia nahatonga azy nanomboka nanoratra momba ny zavatra niainany tamin'ny fomba hanampiany ireo olona tia dia hafa - Afaka tsindrio eto raha Mifandraisa amin'i Rebecca
ny Ela Williams
Fotoana famakiana: 4 minitra Eritrereto hoe mikasa ny hitsidika ny Vondrona eropeana ianao ato ho ato. Raha izany, misy andiana toro-hevitra sy fampahalalana momba ny dia ilaina izay hanampy anao hahafinaritra kokoa ny fiainanao. Mety hisy hieritreritra fa tsy mety hisy tena lehibe…